Ithegi: Iincwadi ezikhawulezayo | Martech Zone
Ithegi: Iincwadi ezikhawulezayo
I-GoSite: Iplatifomu ye-All-In-One yamashishini amancinci ukuya kwiDijithali
NgoLwesithathu, Septemba 16, 2020 NgoLwesibini, Septemba 15, 2020 Douglas Karr
Ukudityaniswa akukho lula ngakumbi phakathi kweenkonzo ezifunwa ngamashishini akho amancinci kunye namaqonga akhoyo. Ukulungiselela ukuzenzekelayo kwangaphakathi kunye namava abathengi angenamsebenzi wokusebenza kakuhle kunokuba ngaphandle kohlahlo-lwabiwo mali kumashishini amancinci amancinci. Amashishini amancinci afuna ukusebenza okwandisa uninzi lwamaqonga: IWebhusayithi- iwebhusayithi ecocekileyo elungiselelwe ukukhangela kwasekhaya. Umthunywa -isakhono sokunxibelelana ngokukuko nangokulula ngexesha langempela kunye nethemba. Ukubhukisha-ukuzicwangcisela ngokwakho ngenkonzo ngokurhoxisa, izikhumbuzo, kunye
Andiqinisekanga ngento esinokuyenza ngaphandle kweqonga lokusebenzisana kwimveliso yethu yomxholo. Njengoko sisebenza kwi-infographics, amaphepha amhlophe, kunye nakwizithuba zebhlog, inkqubo yethu isuka kubaphandi, kubabhali, kuyilo, kubahleli nakwabaxhasi bethu. Baninzi kakhulu abantu ababandakanyekayo ukugqithisa iifayile ngapha nangapha phakathi koGoogle amaXwebhu, iDropBox okanye i-imeyile. Sifuna iinkqubo kunye nohlelo ukuze sityhalele phambili kwinkqubela phambili
Umthungo: UMyalelo oManyeneyo noLawulo lweeNventory
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 25, 2014 NgeCawa, uDisemba 24, 2017 Douglas Karr
IiLebhu zokuLungisa zibonelela ngokudibeneyo kunye nolawulo lwempahla kwiindlela ze-e-commerce. Gwema ukungena ngesandla kwi-spreadsheets, ukufumana ii-invoyisi, okanye ukujonga ulwazi loqhakamshelwano. Ukuthunga kukuvumela ukuba uthengise kwiindlela ezininzi zokuthengisa kunye nolawulo lwempahla ukusuka kwindawo enye yokuThintela iiNdawo zokuThengisa ezininzi-Lawula yonke into ukusuka eku-odoleni kwintlawulo ukuya kuthumelo kwinkqubo enye. Ulawulo lwempahla - ukugcina amanani achanekileyo kunye nokuqinisekisa ukuba ii-odolo zenziwa ngokuchanekileyo. Ukulandelela uku-odolwa ngokuzenzekelayo